Xogtii u danbeysay Abaabul Mooshin oo ka socda magaaladda Dhuusamareb | HOBYOMEDIA
Home WARARKA GALMUDUG Xogtii u danbeysay Abaabul Mooshin oo ka socda magaaladda Dhuusamareb
Xogtii u danbeysay Abaabul Mooshin oo ka socda magaaladda Dhuusamareb.
Magaaladda Dhausumareeb ee Caasimadda Galmudug, Waxaa ka socda abaabul Mooshin ah kaas oo la doonayo in xilka looga qaado Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug Dr Gacal, si loogu badalo Xuseen Iidoow oo ay isku hayb yihiin kana tirsan Barlamaanka JFS oo uu waqtigooda hadda dhamaaday sida ay ii xaqiijiyeen illo Xog-ogaal ah oo madaxtoyadda Galmudug ka ag dhaw.
Madaxtoyadda Galmudug oo Mooshinkaan la doonayo in xilka looga qaado Gacal gadaal ka riixeysa ayaa diyaarisay qorshihii Xuseen Iidoow loogu dari lahaa Baarlamaanka Galmudug, Waxa ayna Xildhibaanka booskaas ku matala oo lagu magacaabo Daabjeerin ku qanaciyeen in uu qaato Wasiir iyo lcag si uu uga tanaasulo booskiisa Xildhibaano ninkaasna loogu badelo.
Guddoomiye ku xigeenka 1 aad iyo 2 aad ee Baarlmaanka Galmudug oo fasax ku maqanaa muddooyinkii ugu danbeeyay ayaa la sugayaa in yimaadan magaaladda Dhuusamareb, si ay mooshinkaas u qabtaan Dr. Gacal-na xilka looga qaado sidii ku dhacday Dhoobo Daareed oo kalena gebi ahaanba Baarlamaanka Galmudug laga saaro.
Haddaba, Qorshaha ah in Baarlamaanka Galmudug lagu daro Xuseen Iidoow, kaddibna Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug laga dhigo ma u suurta geli doontaa Madaxweyne Axmed Qoor Qoor
Previous articleXogta :-Wada-hadallo u bilaawday Galmudug & Hoggaanka Ahlusunna
Next articleGudoomiyaha dhaqanka Hawiye Nabadoo Xaad oo shegay in villa Somalia uu u xiran yhy taliyihi danab una hanjabay dowlada